Luis Suarez oo diiday inuu si dagenaan ah kaga tago kooxda Barcelona – Gool FM
(Barcelona) 25 Agoosto 2020. Xiddiga reer Uruguay ee Luis Suarez ayaan u muuqan inuu doonayo in si dagenaan ah uu kaga tago kooxdiisii ​​Barcelona, kaddib markii uu tababaraha cusub Barca ee Ronald Koeman uu u sheegay inuusan qeyb ka aheyn qorshahiisa xilli ciyaareedka cusub.
Catalunya Ràdio ayaa shaaca ka qaaday shalay oo isniin ah in Ronald Koeman uu kala xiriiray Luis Suarez qadka Taleefanka si uu ugu sheego inuusan qeyb ka aheyn qorshihiisa xilli ciyaareedka cusub.
Idaacada Isbaanishka ee “Cadena COPE” ayaa xaqiijisay dhacdada wicitaanka, iyadoo la xusay in ciyaaryahanka uu aad uga murugooday soo wicitaankii Koeman, wuxuuna Suarez u arkaa inaanan si wanaagsan lala dhaqmin maadaama wax walba uu siiyay kooxda.
Dhanka kale Idaacada Isbaanishka ee “Cadena COPE” ayaa sheegtay in Luis Suarez uusan dooneynin inuu ka tago kooxda ilaa iyo dhamaadka qandaraaskiisa ee xagaaga soo socda, laakiin haddii ay dhacdo in Barcelona ay diido oo ay ku adkeysato bixitaankiisa, wuxuu weydiisan doonaa in loo lacageeyo sanadka kaga harsan qandaraaskiisa.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan inay jiraan kooxo fara badan ee xiiseynaya adeega Luis Suarez, haddii ay dhacdo inuu ka tago garoonka Camp Nou.
Sidoo kale waxaa xusid mudan in Ronald Koeman uu la xiriiray xiddigaha kala ah Ivan Rakitic, Arturo Vidal iyo Samuel Umtiti, si uu ugu sheego inuusan dooneynin inuu iyaga isku halleeyo, sida uu shaaca ka qaaday wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain.